ဦးဇော်: စာပေချစ်သူများအတွက် စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညို ရဲ့ (စာအုပ်လင့်များ) မူလစာမျက်နှာ
စာပေချစ်သူများအတွက် စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညို ရဲ့ (စာအုပ်လင့်များ) မန္တလေးဇာတိ-အဘ-ဦးရွှေဒေါင်းညို၊ အမိ-ဒေါ်စိန်ရင် , အမည်ရင်း-ကျော်စွာ-ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ၊ ၁၉၈၆-ခုနှစ်တွင် ဒဿနိကဗေဒ အဓိကဖြင့် ၀ိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး) ဘွဲ့ရခဲ့ ၊ မဟာဝိဇ္ဇာ ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ - ၁၉၇၀-မှ ၁၉၇၅- အထိ ၊ တက္ကသိုလ် နည်းပြ ဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ပြီး အမှုထမ်းဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ -ပထမဆုံး ပုံနှိပ်စာမူ ၁၉၇၀- အောက်တိုဘာလထုတ် မိုးဝေစာပေ မဂ္ဂဇင်းပါ ( ရန်ကုန်မြို့အလယ်) ၀တ္ထုတို-ပထမဆုံး လုံးချင်းဝတ္ထု ၁၉၇၇- ထုတ် ( လင်္ကာဒီပချစ်သူ) ၊( ယင်းဝတ္ထုကို ယခုအခါ -၁၄ ကြိမ်အထိ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး)ယခုအထိ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ ၊ သမိုင်းနောက်ခံ ၀တ္ထုများ - ဆောင်းပါး၊၀တ္ထု၊ သုတေသနစာတမ်းများအပါအ၀င်(၈၁)အုပ် ရေးသားထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သည်စာပေယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ
ပြည်ပခရီးစဉ်များအဖြစ် (၁၉၈၈ မှ, ၂၀၁၁ အတွင်း စင်္ကာပူ, အိန္ဒိယ, တရုတ်,ထိုင်း,မလေးရှား, အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၊ တောင်ကိုးရီးယားနှင့် ယူအေအီး ( ဒူဘိုင်း) နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်း
အရုံးတွင်- ဒုတိယ ဥက္ကဌ , ရန်ကုန် ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ်တွင် ပညာရေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ယူရင်း စာရေးခြင်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နေထိုင်လျှက်ရှိ ။
ချစ်ဦးညို ၏ စာအုပ် လင့်များ 1. ရှင်စောပုhttp://
4. လောကဓံနှင့် လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်းhttp://
5. နေမင်းလမင်း သိန်းရာထောင်http://
9. ဒုဌဂါမဏိ http://
10. စာမရီသို. ထူးထူးခြားခြားhttp://
11. လင်္ကာဒီပ ချစ်သူhttp://
12. စက္ကရုနှင့် ဘဒ္ဒါhttp://
13. အီဂျစ်နဲ့ အင်္ဂလန် နိုင်ငံကိုမောင်းသွားထားလေမ
14. အစီရဝတီ ကုဏလကေသာhttp://
15. သမိုင်းမတွင်ပေမဲ့ သမိုင်းဝင်နေမည့်စကားများhttp://
16. မလေးမဏိစန္ဒာရဲ့ နှောင်းhttp://
18. မဏိစန္ဒာ ဥဒါန်းhttp://
20. ချစ်ရပါသော ဒဧကရီhttp://
21. ဧကရီ ဖွားစောhttp://
စပ်မိစပ်ရာလေးများ မှ သိသမျှ ။
Sweety Snow18 August 2012 11:56စာအုပ်လင့်ခ်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော် ReplyDeleteUnknown18 August 2012 23:50ဘွဲ့ရ ခုနှစ် (သို့) ဆရာဖြစ် ခုနှစ် လွဲမှားနေတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆနေမိတယ်ReplyDeleteAdd commentLoad more...
ရောက်လာသူ အပေါင်း မင်္ဂလာပါ